Fantsom-Pahitalavitra Kazakh Malaza Amin’ny Vaovao Tsy Marina Misedra Olana Mahamay Taorian’ny Tafatafa Tsy Tena Izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2017 6:12 GMT
Dikasary avy tamin'ny lahatsary YouTube-nà tafatafa tsy tena nisy nalefa tamin'ny media tantanan'ny governemanta Kazakh.
Mieritreritra aho hoe tena hanihany mampalahelo io, izay manimba voalohany ny lazan'ny First Channel “Eurasia”. Indrisy, mety hitondra amin'ny toe-draharaha hoe, raha tena manome vaovao marina tokoa io fandaharana io, ho toy ny vaovao tsy marina ihany ho mety hijeren'ny olona izany.
Toy izany ny valintenin'i Dauren Abayev, Minisitry ny Fampahalalàm-baovaon'i Kazakhstan, mikasika ilay raharaha nahamenatra nandrehitra ny Kaznet, araka ny fiantson'ny maro ny sehatra Aterineton'i Kazakh.
Ilay “hanihany” araka ny voalazan'i Abayev dia tafatafa izay niseho tao amin'ny First Channel Eurasia, fantsona izay an'ny governemanta Kazakh ny ampahany betsaka, ary 20% ny anjaran'ny governemanta Rosiana ao amin'ny ‘First Channel’.
Amin'io, iray amin'ireo mpanolotra vaovao mahay indrindran'ny fandaharana, Aimira Shaukentayeva, mamaly ireo fanontaniana izay hita ho napetrak'i Vladimir Pozner, mpampitafa malaza indrindra ao Rosia ary feo iray mahaleotena vitsy hita amin'ny fahitalavitra Rosiana.
Tsy nolazain'ilay fantsona tamin'ireo mpijery tamin'ny fotoana nandefasana azy hoe tsy tena izy ilay tafatafa, no sady tsy niaiky ihany koa hoe “hanihany” iny raha tsy taorian'ny hatezeran'ireo Kazakh maro tao amin'ny media sosialy sy ny fandàvan'ireo “solontenan'i Vladimir Pozner” nentin'ireo media Kazakhs tsy miankina..
Tao amin'ilay tafatafa, nahafantatra ireo mpijery fa ny toetra tsara indrindran'i Shaukentayeva amin'ny lehilahy dia ny “toetra mahalehilahy”, ho azy ny toetra tsara amin'ny vehivavy kosa dia ny “toetra mahavehivavy” ary ny toetra tena ambony indrindra aminy dia ny “fahafahana manonofy”.
Mpanao gazety eo an-toerana manansongadina fandaharana tsy tena izy an'ny fandrahan'i Pozner.
Ilay fandaharana, izay ny fampitàny ny fanaovan-gazety dia endrika mirefarefan'ny fampielezankevitra ratsy alefa ao amin'ilay First Channel, fandaharana rosiana mitovy aminy vitsy mpijery, efa nandroaka ny mpandrafitra fototra ilay fandaharana, Ruslan Smykov, mpiara-manolotra amin'i Shaukentayeva.
Mba hanazavana hoe nahoana no lasa resabe ny tafatafa tsy marina sy tsy misy dikany toy iny, tsara ny miverina mijery ny lahatsoratra tamin'ny volana Jona nosoratan'ilay i Joanna Lillis mpandalina efa hatry ny ela tao Kazakhstan.
Nosoratana taorian'ireo hetsi-panoherana izay nanovitrovitra an'i Kazakhstan ilay lahatsoratra, taorian'ny nanandraman'ny governemanta hanao fanovàna niteraka resa-be tamin'ny lalàna momba ny tao amin'ny firenena, izay saika hanome tombony ireo fandraharahàna ara-barotra avy any ivelany hitantana tanteraka ny tany hofaina ao anatin'ny fotoana lava kokoa.
Mamaky ny gazetim-baovaony amin'ny fihetsika saro-po sy masiaka i Aimira Shaukentayeva. Fa tampotampoka teo, niha-nalefaka ny feony raha nampitandrina tamim-pahendrena ny ahiahiny amin'ireo rahona mitatao amin'i Kazakhstan izy.
Ho an'ny maro, Shaukentayeva, mpamaky vaovao ao amin'ny First Channel Eurasia – fahitalavitra izay sady an'ny fanjakana Kazakhstani ary an'ny fantsom-pahitalavitra Rosiana iray – no lasa olona fantatra indrindra amin'ny fampielezankevitra miha-mahery setra hatrany ao amin'ireo mpitsikera ny governemanta Kazakhstani.
Vava-ady roa no iaingàn'ny famoretan'ireo manampahefana hanoherana ny onjanà hetsi-panoherana ny fanovàna ny lalàna momba ny tany, nefa kosa manana tanjona iray: hikosehana sy hanomezana henatra. Nilaza ireo mpampanoa lalàna fa nanao fikomiana hanongana ny governemanta ireo mpanao fihetsiketsehana izay nivoaka teny an-dalambe ny 21 May — mety fanombohana fampitomboana ireo tranganà raharaha heloka bevava hanenjahena ireo mpikatroka mafana fo. Mpanao gazety toa an'i Shaukentayeva no mitarika ireo ady hakàna ny fo sy fanahy, mpanao gazety izay niresaka hery avy any ivelany mikotrika tsikombakomba mba hiantsiana herinandro mihoson-drà alohan'ny hilazan'ny mpampanoa lalàna hoe izany no dikany.
Ito ambany ito ireo tati-baovao tsy nalaza tamin'ny May, izay hiampangan'i Shaukentayeva sy Smykov ireo mpandray anjara tamin'ireo hetsi-panoherana momba ny tany ho nandray vola dolara, tamin'ny fandraisany anjara tamin'ireo diabe.
Lahatsary mampihomehy tsy manambara zava-dehibe, ahitàna olona mifanakalo dolara sy mampiditra izany ho ao am-paosiny, no porofony amin'izany zavatra lazain'izy ireo izany.
Tamin'ny faran'ilay lahatsary moa, nolazain”i Smykov fa “ho an'ny tombotsoan'ny firenena” no nandefasana io tatitra io
Izao no fomba famarotan'izy ireo antsika. Ary jereo tsara ny vola ampiasaina! Tsy amin'ny [vola] tenge Kazakh akory fa dolara! Mazava be hoe iza no nanome baiko [ireo hetsi-panoherana ireo].
Hitan'ny olona sasany ho prorofo io andianà ‘vaovao tsy marina’ manokana io, hoe raha tena poretina, mahavita manao toy ny fomban'i Maosko ny governemantan'i Kazakhstan, hoe manameloka an'i Washington amin'ny hafatra mba hanodinkodinana ny tsikeram-bahoaka, na eo aza ny zava-misy hoe misy fifandraisana mantanjaka ihany amin'i Kazakhstan sy Etazonia.
Ireo sasany kosa mahita azy io ho porofon'ny fanaovan'i Kremlin fanafihana midadasika amin'ny habaky ny fampahalalam-baivao ao amin'ny firenena, mba harivany governemanta iray mpisakaiza aminy tsy hiharan'ny ‘revolisiona miloko’ toy izay hita tao Zeorzia, Kyrgyzstan sy Okraina.
Na ahoana na ahoana, haingana ery ireo kilasin'ny mpikamentsomentsona ao amin'ny firenena ny hanàla baraka ilay fantsona, tamin'ilay raharahanà lahatsary misy mpanao hetsi-panoherana notambazana vola sy ilay tafatafa izay tsy niarahana velively tamin'i Vladimir Pozner.
Nivazivazy toy izao i Rinat Balgabayev, iray amin'ireo feo be mpanaraka ao amin'ny Kaznet :
Tsy mijery fahitalavitra aho, ary hatramin'ny omaly, noheveriko fa saribakoly ahetsiketsiky ny olona ao ambany latabatra i Smykov sy Shaukentayeva, sahala amin'i Khryushi sy Stepashi.
Mba ho fantatrareo, ireto ambany ireto i Khryushi sy Stepashi :
Dikasarin'i Khryushi sy Stepashi ao amin'ny YouTube, fandaharana malaza amin'ny fiteny Rosiana, ahitàna saribakoly ahetsika.